Nanatanteraka hetsika lehibe androany izay hitohy rahampitso talata 14 mey, ho fitsinjovana ireo sahirana ara-pahasalamana ny Fiangonana Advantista. Fizahana sy fitsaboana maimaim-poana, toy ny diabeta, maso, fitiliana ny otrik'aretina VIH ary ny fanomezan-drà maimaim-poana no atao amin'izany. Izany moa dia notanterahina tetsy amin'ny parvis Analakely. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 12 mai 2019 19:24
Morarano Toamasina: Nahita reny
Hafaliana no nandraisan'ny mponina eto Morarano an'Irmah Naharimamy, Kandida ho solombavambahoaka, natolotry ny antoko politika Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina, laharana faha 8, eto Toamasina I. Vory ny zaza amam-behivavy, notronin'ireo tanora sy ray aman-dreny, nandray ity reny ity, araky ny teny fandraisana nataon'ireto mponina ireto. Maro ireo mitonina hitondra fandrosoana ho anay hoy ny solotenan'izy ireo, fa Irmah Naharimamy irery no kandida hitondra fandrosoana miaraka amin'i Filoha Andry Rajoelina. Nanentana ny rehetra Irmah Naharimamy hiaraka hientana ampandroso an'i Toamasina, isika vehivavy hoy izy dia manana andraikitra lehibe na ao an-tokantrano na eo amin'ny fiaraha-monina, indrindra eto amin'ny Firenena. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 11 mai 2019 11:41
Fambolem-bary: Mihamafy ny fiaraha-miasa eo amin’i Madagasikara sy Japon
Noraisina ara-teknika ny zoma 10 mey 2019 tetsy amin’ny FOFIFA Ambatobe - Antananarivo ny fotodrafitrasa « Serre de croisement » sy « Laboratoire génétiques moléculaires » izay fanomezana avy amin’ny fiaraha-miasa japoney (JICA) anatin’ny Tetik'asa FYVARY (Fertilitysensing and Variety Amelioration for Rice Yeld). Mifototra amin’ny fikarohana ho fanatsarana ny karazam-bary eto Madagasikara ity tetikasa ity, izay iarahan’ny fanjakana Malagasy sy Japoney nanomboka ny taona 2017 ary maharitra dimy taona.
vendredi, 10 mai 2019 18:45
Androhibe: Velarantany 35ha no handraisana ny lamesa lehibe hotarihin'i Papa Ray Masina
Roa volana izao no efa nanomboka ny asa fampitoviana tantana ny tany malalaka mirefy 35ha hihaonan'i Papa François amin'ny Mpino Malagasy amin'ny 8 septambra 2019. Niditra nijery ny fizotry ny asa teny Soamandrakizay Androhibe Antananarivo androany ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina niaraka tamin’ny Filankevitra Episkopaly Katolika. Efa voafaritra ny ho endriky ny toerana ary voalaza fa efa neken’ny fiketrahana masina tany Rôma ny drafitry ny toerana naseho tany an-toerana. Miditra amin’ny dingana manaraka ny asa ankehitriny ary hovitaina ara-potoana ny fanomanana ny toerana. (Jereo Sary Tohiny)
Ho fanohanana ny Malagasy tra-pahasahiranana monina any Atsimon’ny Nosy, taorian’ny antso tolotanana nataon’ny governemanta malagasy, ity fanomezana vary milanja 7 200 Kg avy amin’ny fanjakana thaïlandey ity ny fiandohan'ny herinandro teo. Mifanandrify indrindra tamin’ny fametrahana amin’ny fiandrianany ny Mpanjaka Rama X any Thaïlande izao tolotanana mariky ny fanehoana firaisankina amin’ny Malagasy izao, araka ny nambaran’ny mpitantana vonjimaika ny Consulat de Thaïlande eto Madagasikara, Kriwat Phamorabutra. Nandray ny fanomezana ny minisitry ny Ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana Razafimahefa Tianarivelo sy ny Sekretera mpanatanteraky ny BNGRC, kolonely Andriakaja Olivier Elack. (Jereo Sary Tohiny)
Trano hazo mivarotra « brocanteur », fivarotana hani-masaka, entana madinika ary kojakoja momba ny lamba sy zaitra miisa 80 no levon’ny afo tanteraka tetsy Ambodivona Boriborintany fahatelo Antananarivo Renivohitra ny alin’ny 08 mey 2019. Fifampikasohana tariby mitondra herinaratra avy amin’ny mpivarotra enta-madinika iray no niandohan’ny afo tokony ho tamin’ny 8 ora sasany alina ka nahatonga ny loza. Tsy nisy ny aina nafoy fa tombanana teo 2 miliara Ariary eo ny teti-bidin’ny entana simba sy may tamin’izany araka ny nambaran’ny tompon'andraikitry ny tsenan’Andravohangy.
Takelaka misy soratra « Halte gendarmerie » miisa 50, miampy horonan-tady fanao fefy « bande de sécurité » miisa 6 no natolotry ny vondrona orinasa SMTP (Société Malgache de Transformation des Plastiques) ho an'ny Zandarimaria tetsy amin'ny Toby Ratsimandrava androany ho fanamorana ny fanatanterahana ny asa fiarovana ataon'ny Zandary andavan'andro. « Efa 20 taona niaraha-niasa tamin'ny Zandarimaria ny SMTP ka ho mariky ny firalahiana eo amin'ny roa tonta dia am-pitiavana no anolorana », hoy ny Tale jeneralin’ny SMTP. « Marika hita maso amin'ny fahatokisana ny Zandarmaria izao, ho fanohanana ihany koa ny ezaka atao eo am-panatanterahana ny asa », hoy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, Jeneraly Ravalomanana Richard.
Hanampy amin’ny fanatsarana ny fandraisana an-tànana ireo marary voan’ny homamiadana ny fahazoan’i Madagasikara ity “machine de radiothérapie” avy amin-dry zareo Indiana ity, ary tsy ho ela ny hanolorana izany amin’ny fomba ofisialy. Ankoatra izany, nodinihina ny fiaraha-miasa mahakasika ny fananganana fotodrafitrasa handraisana an-tànana ireo marary voakasik'ireo aretina tsy maintsy tsaboina any ivelany, toy ny aretina mpahazo ny voa. Nivoitra io nandritra ny fitsidihana ombam-panajana nataon’ny ambasadaoron’i Inde, miasa sy monina eto Madagasikara, Abhay KUMAR, ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Pr Julio Rakotonirina. (Jereo Sary Tohiny)
Lalana iray ao Ambohitsoa, mampifandray an'i Ampamantanana ary Androndra no nampitaraina ny mponina, ka tonga nijery izany tety an-toerana ny kandida ho solombavambahoaka ato amin'ny Boriborintany faha II, Lanto RAKOTOMANGA. Lalana izay ratsy dia ratsy tokoa, nefa mahatratra hatrany amin'ny 4 500 ny olona mivezivezy sy mampiasa izany lalan-kely izany. Anisan’ny asa hatao eraky ny boriborintany faha II, eraky ny Antananarivo ary Madakasikara izany fanamboarana lalana isaky ny elakelan-trano izany, hoy i Lanto RAKOTOMANGA, raha ny programan'ny Filohantsika no jerena, koa santatra ambavarano ihany izao. (Jereo Sary Tohiny)
Manomboka izao dia ity orinasam-pitaterana tsy miankina ity no hitantana ny tobim-piantsonana Maki Andohatapenaka-Antananarivo. Nitsidika ity tobim-piantsonana ity, ny 26 aprily 2019, ny Minisitry ny fitaterana sy Fizahantany ary ny Famantarana ny Toetrandro, Joël Randriamandrato, nijery ifotony ny zava-misy eny, sy ireo lafiny izay tokony hatsaraina, na eo amin'ny mpandeha na eo amin'ny mpitatitra. Nambarany fa milamina amin’ny ankapobeny ny fitantanana sy fandrindrana ny tobim-piantsonana. Efa misy ny rafitra izay napetraka hiadiana amin’ny tsy fandriampahalemana, ny fisian’ny mpitandro filaminana sy ny “caméras de surveillance”.